Izay izao no fanontaniana mipetraka ao an-tsain’ny ankamaroan’ny vahoaka sy ny mpandinika, ankoatra ny fitaintainan-dava amin’ny hoe sao dia ho tratry ny pesta na ho fatin’ny jiolahy ? Tsy mora tokoa ny mitondra firenena, ary mila fifanomezan-tanana amin’ny vahoaka io fa tsy famoretana hoenti-mampanaiky ny rehetra. Tsy vitan’ny fampiasan-kery sy fahefana miaro fieboeboana ho mahavita azy, tahaka ny misy ankehitriny. Mbola minia midingin-drambo sy mampiseho ny hagegeny anefa ny fanjakana HVM, ka miezaka mikiribiby hanova lalàmpanorenana hanamafisana ny seza, mihantsy ady amin’ireo kandida atahorana,… Izany no mbola masaka an-tsaina, fa izay fahasahiranana sy tsy filaminan-tsain’ny vahoaka any tsy mahataitra. Zara aza angamba misy an’ireny amin’izay mba very dia sy tsy manam-potoana hisainana sy hijerena ny hadalana mihoapampana ataon’ny mpitondra intsony ny vahoaka Malagasy. Ny hamisavisana ny ratsy tokoa hiavian’ny soa, ka ny hirariana dia ny tsy hisian’ny korontana sy fifamonoana indray atsy ho atsy, fa mba hivoaka mandresy ny fahamarinana sy fihavanana, ary ho resy tosika ny ratsy.